The Toolbox: Fomba 16 Vaovao Famoronana Tantara · Global Voices teny Malagasy
The Toolbox: Fomba 16 Vaovao Famoronana Tantara
Voadika ny 01 Desambra 2013 11:32 GMT
Nandritra ny Mozfest herinandro vitsy lasa izay, nanome fampahafantarana tsara an'ireo fitaovana sy rindrambaiko tokony ho fantatry ny mpanao gazety (maimaim-poana avokoa izy ireo ary maro amin'ireo no manana loharano mivelatra) i Sarah Marshall avy ao amin'ny Journalism.co.uk. Ny zavatra hita anatin'ity lahatsoratra manaraka ity dia nalaina avy tamin'ny fanolorany…
Fanamarihan'ny tonian-dahatsoratra: nisy ireo famintinana sasany nalaina tao amin'ny Wikipedia.
Ireo Fitaovana Fitantarana
Famoronana tantara amin'ny alalan'ny media sosialy ao amin'ny Storify
Ny Storify dia tolotra tambajotra sosialy izay ahafahan'ny mpampiasa mamorona tantara na mampahatsiahy ny Tantara amin'ny alalan'ny fampiasàna media sosialy tahaka ny Twitter, ny Facebook ary ny Instagram. Ny zava-kendren'ny Storify voalohany indrindra dia ny hahafahan'ireo mpampiasa azy hamorona tantara amin'ny alalan'ny fampiakarana votoaty avy amin'ireo endrika media samihafa anatinà fampahatsiahivan-tantara. Afaka mametraka ireo Tantara Storify noforoniny any amin'ny toeran-kafa ao anaty Aterineto ihany koa ireo mpampias izany.
Soritsary iray ao amin'ny Datawrapper
Ny Datawrapper dia vohikala misokatra natao hamoronana soritsary tsotsotra amin'ny alalan'ny angona mora apetraka ao anaty aterineto. Afaka manovanova izany ianao mba hampifanaraka azy tsara miaraka amin'ny vohikalanao.
3. ThingLink + rindrambaiko amin'ny finday
Fomba iray hiraketana ireo fampahalalana anatinà sary amin'ny alalan'ireo rohy mampifandray – lahatsary, feo, lahatsoratra, ary sary hafa – ho fomba hitantarana tantara an-tsary mampifandray. Afaka apetraka anatinà vohikala sy zaraina ao anaty aterineto izany avy eo.
Ny TimelineJS dia fitaovana manana loharano mivelatra izay ahafahana manangana fampahatsiahivana ara-Tantara manankarena sary mampifandray ary voadika amin'ny teny 40 – fitaovana manana loharano mivelatra avy amin'ny Knight Lab.
Tantara iray mikasika ireo satroka, avy amin'ny TimelineJS.
ho an'ireo tambajotra sosialy:
Ny Storyful dia manome alalana anao hikaroka haingana ireo tambajotra sosialy maro. Manokatra takelaka maromaro izany manerana ireo tambajotra sosialy voafidy (Twitter, YouTube, Tumblr, Instagram ary Spokeo) miaraka amin'ireo fantina napetraka hahazoana sary, lahatsary ary lahatsoratra.
Ny FollowerWonk dia rindrambaikon'ny Mozilla natokana ho an'ny fikarohana raitra kokoa ao amin'ny Twitter- tsy tahaka ny fikarohana ao amin'ny Twitter, any amin'ny “bios” no mikaroka ny FollowerWonk, ary manampy anao handinika sy hampitaha kaonty Twitter.
Ny Topsy ihany koa dia fitaovana fikarohana ho an'ireo tambajotra sosialy, izay manampy anao handinika ireo fironana mandavan-taona. Afaka mikaroka teny manandanja maro ihany koa ianao mba hahafahanao mahafantatra ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo manerana ny media sosialy.
Fikarohana teny manandanja ao amin'ny Topsy, fanehoana an-tsary ny fifandraisan'izy ireo ao anatin'ny media sosialy.
ho an'ireo sary:
Ny TinEye dia “fikarohan-tsary mivadika,” izay hahafahanao mitady ny misy ireo sary hafa mitovy amin'ilay nalefanao. Ireo safidim-pikarohana dia ahitana: “ny nivoaka farany indrindra”, “ny mifanentana indrindra” ary ny “niova indrindra”… Afaka mampiasa io fitaovana fikarohana io ianao hijerenao ny niaviany, ny nampiasàna azy, ny mety hisian'ireo dika namboarina avy amin'io sary io, na ny fitadiavana dika lehibe kokoa.
ho an'ny zavatra hafa:
Ny If This Then That (IFTTT) dia manome alalana anao hiditra anatin'ireo rindrambaiko samihafa anaty aterineto (safidy 73 isan'izany ny Facebook, ny toetrandro, ireo fahana RSS, ny instagram, ny mailaka, ny twitter…) ho fanampiana anao hanao “baiko” (oh: fikarohana) ary hamolavola “hetsika” iray (oh: fampahafantarana anao raha misy vaovao). Ohatra, RAHA “misy mametaka ny anarako anatinà sary iray ao amin'ny Facebook” DIA “handefaso Simaiso aho”… na, RAHA “hoavy ny orana rahampitso” DIA “andefaso mailaka aho.” Nanoratra lahatsoratra miaraka aminà sosokevitra vitsivitsy natokana kokoa ho an'ny mpanao gazety ihany koa i Sarah Marshall.
Rindrambaiko ho an'ny fanaovan-gazety amin'ny finday
Manolotra rindrambaiko maro mikasika ny fanaovan-gazety amin'ny alalan'ny finday ihany koa i Sarah:
Ho an'ireo fitaovana rehetra:
10. Bambuser – manome alalana anao haka, hizara ary hijery mivantana ny lahatsary avy amin'ireo finday na solosaina.
Ho an'ny Android/ Apple /Windows
11. Vyclone - dia sehatra sosialy misahana ny lahatsary izay mamela anao hiara-hamorona, handrindra ary hanova fomba fijery maro ny fotoana iray, araka izany, mamorona lahatsary iray avy amin'ireo votoatin'ireo mpampiasa maro.
Natokana ho an'ny Android
12. StoryMaker - dia rindrambaiko misokatra izay manome fahafahana ireo mpanao gazety na efa matianina na olon-tsotra hamokatra sy hamoaka lahatsary, sary ary raki-peo raitra amin'ny alalan'ireo finday Android, amin'ny fomba azo antoka sy tsy mampidi-doza indrindra. (tetikasa fiaraha-miasa amin'ny Global Voices, vakio amin'ny antsipiriany ao amin'ny bilaogin'ny RV)
Natokana ho an'ny Apple
13. Videolicious -manambatra ireo lahatsary, sary ary feonao anatinà lahatsary iray raitra dia raitra.
14. Viz – mamela anao hamorona soritsary tsotsotra avy amin'ny alalan'ny findainao.
15. iSaidWhat - mamela anao hitahiry, hanova, ary hizara feo haingana amin'ny media sosialy sy ny mailaka.
16. Voddio – io no andiany nivoaka farany tamin'ireo vokatray izay manome fahafahana anao hitahiry, hanova ary handefa ny Rakipeonao sy ny Lahatsarinao avy amin'ny fitaovanao ka mankany anatinà vohikala, na mailaka miaraka amin'ny tolotra fizarana media an'ny Voddio – natao hifanaraka amin'ireo fanovàna natao tamin'ny iOS7.
Manana lisitra fitaovana maro ho an'ireo mpanao gazety ihany koa i Sarah hikarohana sy hanangonam-baovao, hita ao anaty aterineto. Sary famantarana avy amin'ny Flickr nalaina teo ambany alalana creative commons an'i Ktow.